Lakeridge Park iyo Taylor Creek (Seattle) - HistoryLink.org
Lakeridge Park waxay ku fadhidaa in kabadan 35 akar oo kamida Taylor Creek iyo Deadhorse Canyon koonfur-bari Seattle. Beertu waxay ku taal koonfurta isgoyska 68th Avenue S iyo Rainier Avenue S aaga meelaha ugu dambeeya magaalada Seattle. Dooxa waxa loogu magac daray Taylor Mill, oo ah warshada looxda ee qarnigii sagaal iyo tobnaad ku taalayxeebta Lake Washington. Dooxada uu marayo daadka harada ku shubmaaayaa loogu magacdaray faras meesha badanka iman jiray oo ku dhintay jarka dooxa. Camirraha la yidhaa E. S. Goodwin ayaa sawirayxaafadda Lakeridge 1920dii, Magaalada Seattle-na waxay ka aasaastay xaafada Lakeridge Park dooxadii loo yaqaanay Deadhorse Canyon 1940dii. Sannadahan dhawaa, beerta, laagta, iyo dooxa waxay ahaayeen goobta lagu qabtay barnaamij ujeedadiisu ay aheyd, soo nooleynta dooxada magaalada oo loola jeeday dib u soo nooleynta kalluunka hilibka cas ee dooxada si u ugax u abeero.